Guddoomiyaha Aqalka Sare iyo Beesha Caalamka oo ka wadahadlay arrimaha doorashooyinka | Xaysimo
Home War Guddoomiyaha Aqalka Sare iyo Beesha Caalamka oo ka wadahadlay arrimaha doorashooyinka
Guddoomiyaha Aqalka Sare iyo Beesha Caalamka oo ka wadahadlay arrimaha doorashooyinka
Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare BFS iyo Guddiga Hinddise Sharciyeedka Doorashooshinka Qaranka u xilsaaray Aqalka Sare ayaa kulan Wadajir ah waxa ay la yeesheen safiirada beesha caalamka u fadhiya Soomaaliya.
Kulanka ayaa intiisa badan waxaa looga hadlay Doorashada 2020-2021 la filayo in ay qabsoonto qaabka ay u dhacayso, Ansixinta Hindise sharciyeedka Doorashooshinka Qaranka oo haatan horyaala Golaha Aqalka sare, in loo baahan yahay dib u heshiisiin si dadka Soomaaliyeed oo mid ah ay u dareeraan doorasho.
Dhinaca kale Guddiga Hinddise Sharciyeedka Doorashooshinka Qaranka u xilsaaray Golaha Aqalka Sare ayaa kulan la qaatay guddiga doorashooyinka Qaranka, Goobta kulanka ka dhacayay ayaa qodob qodob loo dul istaagay Hinddise sharciyeedka Doorashooshinka qaranka.
Kulanka markuu soo gabagaboobay ayaa warbaahinta Qaranka waxaa la hadashay Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Qaranka Xaliimo Ismaaciil (Xaliima Yarey) waxa ay sheegtay in Guddiga ay sharxeen qodobada hinddise sharciyeedka, 2021 loo balansan yahay in dalka ay ka dhacdo doorasho.
Sen, Maxamed Amiin Sheeq Cusmaan guddoomiyaha Guddiga Hinddise sharciyeedka Doorashooshinka Qaranka u xilsaaray Golaha Aqalka Sare ayaa sheegay in ay wadaan latashiyo iyo xog ururin dhanka hindise sharciyeedka doorashooyinka sanad ka dib lagu wado in ay dalka ka dhacaan.